‘Mujeres Construyendo’: Fampivoarana Ny Vehivavy, Bilaogy Iray Amin’ny Fotoana Iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Marsa 2012 2:11 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, বাংলা, Français, Dansk, Español
Voalohany indrindra sy alohan'ny zavatra rehetra, ny vehivavy mpibilaogy, dia vehivavy iray mahery fo, sahy sy tena mandray ny andraikiny. Nahoana? Satria amin'ny alalan'ny bilaoginy izy dia afaka maneho ny heviny, milaza ny ao an-tsainy, izay tsapany, ny maha-izy azy. Raha toa izy matahotra hiteny na hametraka ny heviny, atrehany io tahotra io ary ezahany hihoarana.
- “¿Quién es una bloguera?” [es] (Iza moa ny vehivavy mpibilaogy?), Mujeres Construyendo
Saika ny antsasaky ny mpampiasa aterineto ao Amerika Latina dia ny vehivavy no mameno azy. Kanefa, na dia mibahan-toerana betsaka eo amin'ny habaky ny aterineto aza ry zareo, dia tsy manao afa-tsy ny manjifa votoaty no tena ataony. Mujeres Construyendo [es], ilay sehatra voalohany ho an'ny vehivavy mpibilaogy amin'ny teny Espaniola, dia maniry ny hanova ny vehivavy miteny Espaniola ho lasa mpamorona, fa tsy hitoetra fotsiny ho mpanjifa izay votoaty hita amin'ny aterineto.
Ny mpanangana azy io, Claudia Calvin, dia namaly fanontaniana vitsivitsy mikasika io sehatra io sy ny vondrom-piarahamonin'ireo vehivavy bilaogera miteny Espaniola.
Global Voices: Tamin'ny fomba ahoana ary oviana no noforonina ny Mujeres Construyendo ?
Claudia Calvin: Teraka tany amin'ny 2008 tany ny Mujeres Construyendo, taorian'ny vanim-potoana naha-bilaogera ny tenako ihany koa. Teraka tamin'ny fahalinako mitetitety ny habaka aterineto sy mikaroka zava-baovao izay mahasarika ny saiko izy io : ireo vehivavy miteny Espaniola mandray anjara eto amin'ny aterineto dia manohy mampita faharesen-dahatra mifàka lalina ao anatin'ny kolontsainay. Inona izany? Ny faharesen-dahatra novolena tao anatinay hatramin'ny fony naha-zaza anay, ny fihevitra hoe “Arakaraky ny hanginantsika, vao mainka koa isika tsara tarehy”. Hitako fa ny fandraisanay anjara amin'ny maha-bilaogera dia samihafa mihitsy amin'ny maha-vehivavy Amerikana. Izy ireo amin'izao fotoana no manome ny 60% amin'ireo bilaogera ao amin'ny fireneny ary ireo vehivavy bilaogera amin'ny teny Espaniola tsy manome afa-tsy ny 27%. Fony nanomboka ny Mujeres Construyendo aho, somary tsy namparisika ihany ny tarehimarika … 15%.
Nikatsaka fatratra toerana iray hahafahan'ireo vehivavy bilaogera mihaona aho, habaka iray tsy toy ny vatasarihana, fa kosa toerana iray iaraha-mipetraka, vondrom-piarahamonina iray, tahaka ny hatrizay. Rehefa tsy nahita mihitsy aho, dia nanapa-kevitra ny hanangana, ary izay no niteraka ny Mujeres Construyendo.
Niresaka tamin'ireo namana mahay ny famoronana aho ary dia ry zareo no niketrika nitondra ny hevitra narosoko ho tonga tena izy. Ary velona noho izany ny Mujeres Construyendo tamin'ny 2009.
GV: Inona no tanjon'ny Mujeres Construyendo? Inona no tiany ho tratrarina miaraka amin'ity sehatra fitorahan'ny vehivavy bilaogy ity?
CC: Ny tanjon'ny Mujeres Construyendo dia ny mba hahafahan'ny vehivavy mianatra mampiasa ny teknolojia vaovao sy ireo fitaovana izay atolotry ny aterineto mba ho hery manosika, hitomboana sy hivelarana. Fitaovana mandrisika ho anay ny bilaogy – ahafahanay mampita ny zavatra ataonay izy ireny, izay saininay, izay hitanay. Ireny dia mamela anay ho afaka mandray anjara amin'ny fifanakalozan-kevitra anaty sehatra natao ho an'ny daholobe, ny aterineto.
Ao anatiny kokoa izahay amin'ny maha-mpanara-maso sady mpanjifa votoaty mitaha amin'ny hoe mpanome tolotra. Tena takona tany ambadiky ny fahafahana manangana ny tena izy isika, izay maneho ny tombontsoantsika sy ny fomba hifankahafantarana ary handraisana anjara eto anivon'ny tontolo, amin'ny lafiny sosialy, hatramin'ny lafiny ara-politika sy fandraharahana, tsy lazaina intsony ny momba ny tena manokana sy ny ara-pianakaviana.
Miatrika karazana fanilikilihana maro ny vehivavy ao anaty fiarahamonina, tsy mila ampiantsika ny fanilikilihama azy eo anivon'ny tontolo dizitaly ireo rehetra efa misy ireo.
GV: Fa maninona no manana lanja be ho an'ny vehivavy ny fananany bilaogy?
CC: Araka izay nomarihako tany aloha, ny biloagy dia fitaovana fanomezana hery raha toa izy ireny manome fahafahana ny vehivavy ho afa-miserasera sy maneho hevitra, manolotra soso-kevitra sy mifampiresaka ao amin'ny aterineto. Fitaovana izy ireny entin'ny vehivavy mirotsaka an-tsehatra mamaritra sy manorina ny fiainana izay taratry ny tombontsoany sy ny fomba fijeriny. Ireo feon'ny vehivavy, eny anivon'ny tontolon'ny bilaogy, dia zava-dehibe satria misolo tena ny antsasaky ny mponina eto an-tany. Manana ny lanjany ny feon'izy ireo amin'ny lafiny hoe ry zareo no mpisehatra ara-tsosialy, mpanao politika, mpifidy, mpanatanteraka, mpanapa-kevitra ary isan'andro izy ireo dia miaina tontolo sy toe-javatra samihafa (miainga aminà herisetra, mankany aminà olana ara-bola; ny loza voajanahary hatramin'ny ady). Izy ireo no mpisehatra isanandro ny fiainana ka manana ny toerany ny fomba fijeriny sy ny vinan-dry zareo, omena lanja izy ireo, taratry ny zava-misy. Ny fahanginan'izy ireo, izay na ry zareo aza toa tsy tonga saina amin'izany, dia miasa manampy trotraka ny fanavahana ara-pananahana efa misy, na midika ihany koa fa anjorom-bala ry zareo. Arakaraky ny isehoana sy ivoahan'ny feon-dry zareo miandalana, dia hitohy hiova hatrany ity tontolo ity.
GV: Firy izao no vehivavy manana bilaogy ao amin'ny Mujeres Construyendo?
CC: Ny vondrom-piarahamonina ao amin'ny Mujeres Construyendo dia ny fitambaran'ny sehatra Mujeres Construyendo (www.mujeresconstruyendo.com) sy ireo tambajotra sosialy izay mampifandray an'io vondrom-piarahamonina io. Ny fitambaramben'ny olona mifandrohy ao izao dia manodidina ny sivy arivo.
GV: Inona no endrikendriky ny vehivavy mibilaogy ao amin'ny Mujeres Construyendo?
CC: Tsy maintsy lazaiko fa na ny lahy na ny vavy dia samy mampiasa io sehatra io avokoa. Habaka iraisana izahay ary tsy mino izahay hoe afaka hiresaka fitoviana ianao raha etsy andaniny sady mampihatra fanavahana, noho izany dia raisina an-tanan-droa koa ireo lehilahy bilaogera. Ny ankamaroany, teneninay fa vehivavy ny maherin'ny 96%. Avy amin'ny tanàn-dehibe no maro raha ny mombamomba azy ireo, eo anelanelan'ny 25 sy 45 taona, ary saika avy any Meksika, Espaina, Arzantina, Venezoela ary Etazonia. Tiako ny hifantohana bebe kokoa amin'ny iray amin'ireo bilaogera tena mavitrika ao aminay, izay efa niatrika tafatafa rahateo tany aminà fahitalavitra. Bertha, vehivavy tsy manam-paharoa, 82 taona izay mampiseho amintsika fa tsy misy fetran-taona ny fianarana ary matanjaka ireo fitaovana dizitaly sady afaka manohy mampisy dikany ny fiainan'ny olona izy ireny.
GV: Inona no hoentin'ny 2012 ho an'ny Mujeres Construyendo?
CC: Amim-pahavononana tanteraka no hanombohanay ny taona. Ny fanokafana ny trano vaovao sy ny tranonkala vaovaonay dia hahafahanay mifampikasoka, mifankahalala tsirairay avy sy miara-miaina amin'ny fomba akaikikaiky kokoa. Ao ambadik'io dia misy asa sy fanoloran-tena ary tianay hohamafisina anaty habaka iray mba hahafahan'ireo vehivavy izay mandray anjara ho afaka mamoaka ny feony izay itondrany ny kely avy aminy, tsy hoe ho an'ny fampivelarana azy ireo manokana fotsiny , fa koa ho fanomezana hery ny demaokrasia. Tianao hampitomboina ny isan'ireo vehivavy bilaogera mandray anjara ao anatiny sy mifandray amin'ny vondrom-piarahamoninay ka noho izany no iasanay manome fitaovana ireo vehivavy bilaogera izay hahafahan-dry zareo manamafy ny fisiany sy manatratra ny tanjony, na io momba ny tenany manokana, na ny ankohonana, na momba ny asa. Ao an-damosin'io asa io dia misy fifamatorana sy tetikasa izay ho hita ato anatin'ny fotoana fohy, ho resahantsika ato ho ato ny mikasika azy rehefa tonga ny fotoana.
Misaotra betsaka anareo liana te-hahafantatra ny momba anay ary manantena indrindra fa amin'ny alalan'ny Global Voices dia ho be ny vehivavy no harisika hitondra ny feony ho ao amin'ny vondrom-piarahamoninay. Isika miaraka no afaka hitondra fiovàna.
Claudia koa dia bilaogera [es] ary mpandefa bitsika amin'ny solonanarana @LaClau [es]. Azonao arahana ny Mujeres Construyendo ao amin'ny Facebook [es], Twitter, [es] YouTube [es], ary LinkedIn [es].